Android အတွက် Pfingo talk လိုချင်လို့ပါ - MYSTERY ZILLION
Android အတွက် Pfingo talk လိုချင်လို့ပါ
Android 2.2 (irobot tablet) မှာ Pfingo talk စမ်းထည့်ပြီးသုံးချင်လို့ လိုက်ရှာကြည့်တော့ http://goo.gl/3zudV အဲ့ဒီမှာတော့တွေ့တယ် ..
ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိလို့ပါ။ နောက်တစ်ခုသိချင်တာက Android Market မှာလည်း မြန်မာကိုဘန်းထားတယ်ဆိုလို့ us proxy နဲ့သုံးပြီးဝင်ရင်လည်း ဝင်လိုက်တဲ့ gmail အကောင့်က Android Market အကောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး another account နဲ့ဝင်ပါဆိုပြီးပြောတယ် . .ရှင်းပြပေးကြပါအုန်း။
အစ်ကို http://mmdroid.com/မှာရှိတယ် ဒီ MZ မှာရှိတဲ့ ညီအစ်ကို တွေ ပေးထားတာလေ
ဂွတ်တယ် . . .ကြိုက်သွားပြီ . .